Saraakiishii Ciidamada AMISOM ee xasuuqa ka geystay Golweyn oo Dil Toogasho ah lagu xukumay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Saraakiishii Ciidamada AMISOM ee xasuuqa ka geystay Golweyn oo Dil Toogasho ah lagu xukumay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxkamadda ciidamada AMISOM ee Xalane ayaa maanta Xukunno dil ka mid yahay ku riday askartii fuiisay xasuuqii Bishii Ogost ka dhacay egaanka Golweyn ee ka tirsan gobolka Sh/hoose oo dad shacab ah lagu laayey.
Maxkamadeynta oo ilaa 5-tii Bishan Novembar 2021 ka socotay Xalane ayaa la soo taagay shan askari oo AMISOM ka tirsan, kana soo jeeda dalka Uganda, iyadoo lagu helay inay 7 qof oo rayid ah ku dileen degaanka Golwayn ee Shabeellaha Hoose.
Falka ay ku kaceen askartaasi ayaa ahaa mid naxdin leh, waxayna markii ay dadkaasi dileen, ay qaar ka mida ku dul fadhiisiyeen miino, kadibna ku qarxiyeen. Labo ka mid ah askartii denbiga lagu helay ayaa lagu xukumay dil, halka seddaxda kalena lagu xukumay min 39 sano oo xabsi ah.
Sarkaalka ciidamada watay oo ahaa kabtan ayaa lagu xukumay dil toogasho. Ninkii ku xigay ee watay unugga wax laayay, waxaa isna lagu xukumay dil toogasho. Ninkii maydka miinada dul saaray ee ku qarxiyayna waxaa lagu xukumay 39 sano oo xabsi ah. Labadii askari ee xabadda ku furtay dadka ayaa waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xabsi.
Goobta xukunka uu ka dhacay waxaa joogay qaar ka mid ah ehellada dadkii rayidka ahaa ee la dilay, oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin sida uu xukunka u dhacay. Afhayeenka Beeralleyda Gobolka Shabeellaha Hoose, Xuseen Cismaan Waasuge, oo ku sugnaa maxkamadda, ayaa sheegay inay ku farxeen xukunka soo baxay.
Marqaatiga laga dalbaday dadka dhibanayaasha ayaa ahaa wiil uu dhalay ninka lagaa beerta dilku ka dhacay. Toddobo qof ayaa ku marqaati furay oo lix ka mid ah ay yihiin ciidanka Uganda ee meesha joogay”.
Previous articleHaweeney lagu dilay Degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho iyo faahfaahin laga helay
Next articleHorjooge aan la fileyn oo ka goostay Alshabab isuna dhiibay Ciidamada Degmo ka tirsan Sh/Hoose